5-ta barnaamij ee ugu wanaagsan ee joornaalada loogu talagalay Android | Androidsis
5-ta barnaamij ee xusuus qor ee ugu wanaagsan Android
Haaruun Rivas | 16/07/2021 08:00 | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Marnaba ma xuma in la helo joornaal lagu qoro dhacdooyinka, sheekooyinka maalinlaha ah, xigashooyinka, fikradaha iyo joojinta tirinta. Waxay noqon kartaa wax kasta oo aad rabto inaad ku qorto hal, sababtaa awgeedna waxay leeyihiin ujeedooyin dhowr ah, nasiib wanaag, waxaa jira dhowr codsiyo wargeys ah oo laga heli karo Google Play Store.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa qoraal aan ku taxnay 5 barnaamijyada joornaalada ugu fiican ee loogu talagalay Android. Dhammaantood waxay ku yaalliin Play Store, isla mar ahaantaana, waa lacag la'aan waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan, la soo dejiyey lana isticmaalay, marka la eego shaqooyinkooda kala duwan iyo wax kasta oo ay bixiyaan.
Munaasabadan cusub waxaan ku siineynaa isku-darka 5-ta codsi ee wargeys ee ugu wanaagsan mobilada Android. Waxaa habboon in mar kale la muujiyo, sida aan had iyo jeer yeelno, taas Dhammaan barnaamijyada aad ka heli doontid boostadan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Si kastaba ha noqotee, hal ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo qiimo leh, sida shaqooyinka horumarsan iyo astaamaha gaarka ah. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo.
1 Xusuus-qor shakhsiyeed
2 Xusuus-qorteyda - Xusuus-qorka, Xusuus-qorka leh qufulka
3 Xusuus-qorka ereyga 'unicorn' (sawirka faraha)
4 Xusuus-qorteyda - Xusuus-qor Xaaladda oo leh Quful
5 Xusuus-qorka sirta ah
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la helo barnaamij joornaal shaqsiyeed, waana taas sababta aan tan koowaad u horreysiinnay. Haddii aad qorsheyneyso inaad bilowdo caado qorista wax kasta oo noloshaada ku saabsan, laga bilaabo guulrada illaa dhicitaanka iyo wax kasta oo kugu dhici kara, Xusuus-qorka Shakhsiyeed waa ikhtiyaar wanaagsan, xitaa intaa ka sii badan haddii aad horey u lahayd xusuus-qor jireed ama barnaamij aasaasi ah.
Waana taas, su'aasha, in ka badan 50 milyan oo soo degitaan oo dhabarkiisa ah, waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee noociisa ah, oo aad ku qori karto qoraal maalinle ah, horumarka, howlaha, barnaamijyada, ballamaha, howlaha aad qabanayso iyo kuwa horey loo qabtay, iyo inbadan. Intaas waxaa sii dheer, amniga iyo asturnaanta dammaanad qaadka ah, waad ka horjoogsan kartaa marin u helida barnaamijkan asal ahaan, kaas oo aad u baahan doonto inaad gasho biin si aad u hesho dhammaan waxyaabaha ku qoran xusuus-qorkan.
Gelinta qoraalka waxay u oggolaaneysaa isticmaalka emojis (emoticons) in lagu muujiyo shucuurta, dareenka, iyo inbadan. Inta soo hartay, waxaad ku siin kartaa dhammaan sheekooyinkaaga cinwaan cinwaan ah si loo aqoonsado goor dambe. Midda kale waxay tahay inaad beddeli karto oo aad hagaajin karto cabirka qoraalka, midabka, qaabka iyo ficil ahaan wax kasta oo aad ka fekeri karto si qoraaladaadu u noqdaan kuwa ugu midabada iyo shaqsiyadda badan.
Xusuus-qor shakhsiyeed sidoo kale wuxuu leeyahay kaydinta daruurta Sidan oo kale, xogta, macluumaadka iyo dhammaan qoraalada horey loo duubay laguma keydin taleefanka, laakiin waxay ku keydsan yihiin barnaamijka arjiga, sidaas darteed, qaabkan, waxaad ku heli kartaa xusuus-qorka adoo adeegsanaya taleefannada casriga ah ee Android.
Ugu dambeyntiina, barnaamijkan wuxuu kaloo taageeraa taageerada iimaylka, sidaas waxaad tikidhadaada ugu diri kartaa emaylkaaga. Waxa kale oo ay leedahay jadwal taariikhi ah, bar raadinta, xulashooyinka xulashada, iyo inbadan. Waa, shaki la'aan, mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran ee noociisa ah, waana sababta aan ugu soo darnay qoraalkan uruurinta.
Xusuus-qorteyda - Xusuus-qorka, Xusuus-qorka leh qufulka
Beddelka kale ee wanaagsan ee maalin kasta si loo qaado maalinba maalinta ka dambeysa lagu sharraxo app waa tan. Iskuxirkiisu waa mid ka mid ah kuwa ugu nadiifsan, hagaagsan oo dhameystiran. Dareenkan, waxaan haynaa barnaamij sidoo kale leh tifaftire qoraal ah oo leh ikhtiyaarro badan oo wax looga beddeli karo oo loo abuuri karo galitaanno hal-abuur leh, oo leh astaamo, sawirro, istiikarada iyo xitaa fiidiyowyo, wax aan dhammaan barnaamijyada noocan oo kale ahi taageerin. Sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho nooca font iyo qaabka, si aad uga habeysid dhammeystirka dhammaan qoraalada, sharaxaadda, ballamaha iyo kalandarka.
Sida kuwa kale qaybteeda, joornaalkani wuxuu ilaaliyaa macluumaadka wuxuuna siiyaa amniga iyo sirta ku saabsan waxyaabaha ku jira, sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho inaad dhigto taleefankaaga oo aad qof kale soo qaado si uu u eego wax kasta oo aad keydisay. Kaliya deji qaab ama biin quful si aad ugu baahan tahay marin looga helo. Haddii mobilkaagu leeyahay akhristaha faraha shaashadda hoosteeda, sidoo kale wuxuu la jaan qaadi karaa qufulkayga 'Diary'.
Iskuwaafajinta joornaalkaaga Google Drive ama Dropbox waa amarka maalinta. Tan, waxaad ku heli kartaa xusuus-qorka adoo adeegsanaya aaladaha kale ee Android si fudud, sidaa darteed moobilkaagu daruuri ma'aha inuu keydiyo xogta iyo wax kasta oo ka diiwaan gashan xaashiyadiisa. Sidaa darteed, haddii aad lumiso mobilkaaga ama shil dhaco, xusuus-qorkaagu wuxuu ku badbaadi doonaa daruuraha wax kasta oo aad horay ugu soo sheegtay.
Ku saabsan astaysto ee interface ee app this, sidoo kale waad beddeli kartaa midabka asalka ah ama dooran kartaa, haddii aad rabto, habeen ama xaalad mugdi ah, kaas oo aad ku ilaalin karto aragtidaada xaalado yar ama aan iftiin lahayn. Muuqaal kale oo xiiso leh ayaa ah in barnaamijkani uu u oggolaanayo dhoofinta wargeyska qaabab txt ah. iyo PDF, iyagoo waliba bixinaya adeegsiga kalandarka iyo waxyaabo kale.
Developer: Barnaamijka Caanaha & Qoraalada & Tifatiraha maqalka & Duubista Codka
Xusuus-qorka ereyga 'unicorn' (sawirka faraha)
Si baaskiil barnaamij xusuus qor ah oo taabasho dheddig ka badan wax kasta oo kale, Xusuus-qor leh lambarka sirta ah 'Unicorn' waa midka kugu habboon adiga sida giraanta fartaada. Sida magaceedaba ka muuqata, xusuus-qorkan waxaa lagu ilaaliyaa ereyada sirta ah iyo xitaa faraha (kaliya haddii moobiilku leeyahay dareeraha faraha jirka, dabcan). Haddii aad ilowdo lambarkaaga sirta ah, su'aasha amniga ee barnaamijkan ayaa kaa caawin doonta inaad xusuusato; kaliya hore u dhigay.
Naqshadeynta, marka lagu daro inay tahay mid dhedig ah, sidoo kale waxay ku habboon tahay gabdhaha guriga. Joornaalku waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka ah ee lagu mashquuliyo naftaada, dhiirigelinta akhriska, male-awaalka iyo kicinta caado-qorista iyo qorista carruurta.
Barnaamijkan ayaa leh wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku qorto xusuus, sheeko xariiro iyo wax kasta oo aad ka fekeri karto. Haddii aad u maleyso inaad ilaawdo dhammaan howlaha aad hayso maalinta, sidoo kale waxay ku habboon tahay inaad xusuusato waxyaabaha la qabanayo iyo jadwalka ballamaha gadaal, maadaama ay leedahay xusuusin, ogeysiisyo iyo in ka badan.
Waad abaabuli kartaa is-dhexgalka sida aad doorbideyso inaad u fiirsato xusuus-qorkaaga, oo leh taayiro iyo liistooyin aragti ah. Waxay kaloo leedahay tirakoob kuu oggolaaneysa inaad aragto maalinlaha, billaha iyo sannadlaha aad gasho, iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto xusuusta shabakadaha bulshada sida Facebook iyo barnaamijyada sida Messenger ama Gmail. Waxa kale ayaa ah in gelitaanku u oggolaanayo abuuritaanka sawirro, burushyo midabbo kala duwan leh iyo in ka badan si ay u sameeyaan sharraxaad midab leh oo hal abuur leh, iyo sidoo kale codad iyaga ka dhigaya kuwo xiiso leh.
Developer: Netigen Unicorn Diiwaanka
Xusuus-qorteyda - Xusuus-qor Xaaladda oo leh Quful
Xusuus-qor kale oo ku qoran dukaanka barnaamijka Google Play Store oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna midabka badan waa My Diary - Lock Mood Diary.
Sidoo kale waa kale oo fiican barnaamijyadii hore ee aan ku soo taxnay qormadan, maadaama oo uu yahay barnaamij hawlo fara badan leh oo ay ku jiraan quful, kaas oo lagu furi karo furayaasha iyo isticmaalka faraha oo loo maro dareeraha mobilada Android.
Iska ilow abuuritaanka qoraallo dhaqameed joornaalkaaga ah. Barnaamijkan waxaad ku abuuri kartaa qoraal qoraallo leh qaabab kala duwan oo mawduucyo ah, noocyada noocyada xarfaha iyo istiikarada ah si aad u sameysid xusuus iyo sheekooyin ka xiiso badan oo hal-abuur leh. Waxa kale oo aad ku dari kartaa sawirro, fiidiyowyo, iyo maqallo, si aad uga dhigto mid firfircoon.
Mawduucyada sanduuqa ee ay tahay in lagu xusho liistada wargeyskan gelitaan kasta waxaa ka mid ah qaar leh mowduucyo xilliyeedyo sanadle ah, midab la'aan iyo kuwo kale oo badan oo la jaan qaadaya dhadhanka qof walba iyo, isla mar ahaantaana, waxa gelitaanku yahay. tixraac, sidaa darteed waad u oggolaan kartaa male-awaalkaagu inuu ku hago markaad tafatirto sheeko ku jirta joornaalka. Waxaad sidoo kale ku qori kartaa qoraalada codka barnaamijkan, sidaa darteed maahan inaad waqtiga oo dhan qorto waxa ku dhacaya maalinkasta.
Developer: Xusuus-qorka & Joornaalka App
Xusuus-qorka sirta ah
Si loo dhammeeyo qoraalkan uruurinta ee 5-ta barnaamij ee xusuus-qorka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android, waxaan leenahay xusuus-qor qoto dheer oo leh lambarka sirta ah. Joornaalkan, sida kuwa kale ee aan kor ku soo xusnay, amniga iyo sirta si dhab ah ayey u qaadataa, markaa kiiskan waxaan ku xannibnay pin afar-god ah. Waxa kale oo jira hawl ku saabsan casriyeynta, soo celinta iyo tirtirka furaha sirta ah, iyo sidoo kale quful toos ah kadib in ka badan 5 daqiiqo oo aan firfircooneyn.
Waxay ku fiican tahay dumarka iyo keydinta sirta, dhacdooyinka, wax-qabadka iyo wax kastoo. Iskuxirkiisu waa fududahay in la fahmo, isla mar ahaantaana, aad u abaabulan, sidaa darteed waad la wareegi kartaa gelitaan kasta daqiiqado gudahood.
Sidoo kale waa a mid ka mid ah kuwa ugu fudud, culeyskiisuna yahay ilaa 7 MB. Arrinta kale ayaa ah inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan, iyadoo in ka badan 5 milyan oo laga soo dejisto ay ku taal Play Store iyo sumcadda 4.5 xiddigood.
Developer: Si fudud
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5-ta barnaamij ee xusuus qor ee ugu wanaagsan Android
5-ta codsi ee ugu fiican ee wax lagu iibiyo
Top 8 beddelka in AirTags for Android